Tartamayaasha Degmada Hodan oo xaqiijiyay inay u soo gudbeen wareegga 3aad ee tartanka “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Tartamayaasha Degmada Hodan oo xaqiijiyay inay u soo gudbeen wareegga 3aad ee tartanka “SAWIRRO”
Tartan cilmiyeedka bisha Ramadaan oo galay sanadkii todobaad oo ay qabaneyso Warbaahinta Qaranka, isla markaana si toos ah looga daawanayo Telefishinka Qaranka, lagana dhageysto Idaacadda Radio Muqdisho ayaa waxaa caawa kulanka todobo iyo tobnaad oo ah wareegga labaad ku tartamay tartameyaasha Degmooyinka Hodan Vs Wadajir oo ka wada tirsan Gobolka Banaadir, waxaana barnaamijka sanadkii shanaad oo xiriir ah taabagelineya Maamulka Gobolka Benaadir.
Tartameyaasha labada degmo ee Hodan Vs Wadajir ayaa muujiyey tartan aad u adag, isla markaana ahaa mid xiiso gaar ah xambaarsan, iyagoo soo bandhigay aqoon iyo asluub wanaag labada dhinac inta uu tartanku socday.
Tartameyaasha Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir waxaa la weydiiyey todobo Su’aal, waxa ay ka jawaabeen Afar su’aal, waxaana ay iska qaldeen saddex su’aal, waxa ay ka faa’iideysteen saddex su’aal oo soo hareer martay tartamaaysha Degamda Wadajir, sidaa darteed wadarta guud ee dhibcaha tartameyaasha Degmada Hodan ay heleen waxay noqotay toban iyo afar (14) dhibcood.
Tartamayaasha Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir waxaa dhankooda la weydiiyay todobo su’aal, waxa ay ka jawaabeen Hal su’aal, iyagoo iska qaldeen lix su’aal, ma jirin wax ka faa’iideysi ah oo ay heleen, sidaasi darteed wadarta guud ee dhibcaha ay heleen tartameyaasha Degmada Wadajir waxay noqotay labo (2) dhibcood.
Tartamayaasha Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir ayaa caawa u soo gudbay wareegga saddexaad ee tartanka, halka tartamayaasha Degamda Wadir ay tariinka ka hareen
Habeen dambe haddii uu Alle idmo oo ah habeenka sideed iyo tobnaad ee tartanka, waxaa foodda is dari doono, tartamaayasha degmooyinka Heliwaa Vs Shibis oo ka wada tirsan Gobolka Banaadir.
R/W Khayre oo Kullan Afur ah la Qaatay Dhallinyarro Soomaaliyeed oo Xukuumaddu ka soo qaaday Xabsiyadda Liibiya “SAWIRRO”
R/wasaare kuxigeenka Dalka”fikradaha xagjirnimada iyo kuwa dhiiga dadka banaystay waxaa looga gudbi karaa aragti midaysan+sawiro
R/wasaare kuxigeenka Dalka"fikradaha xagjirnimada iyo kuwa dhiiga dadka banaystay waxaa looga gudbi karaa aragti midaysan+sawiro